के गर्भावस्थामा एफेक्सोर लिन सुरक्षित छ? - औषधि जानकारी | सेप्टेम्बर 2021
कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा खेलहरु भारी खेल औषधि जानकारी, समाचार कम्पनी, चेकआउट समाचार कम्पनी, समाचार स्वास्थ्य शिक्षा स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण समुदाय, कल्याण कल्याण मनोरञ्जन कम्पनी, औषधि जानकारी समुदाय औषधि बनाम मित्र
मुख्य >> औषधि जानकारी >> के गर्भावस्थामा एफेक्सोर लिन सुरक्षित छ?
जब तपाईं गर्भवती हुनुहुन्छ, तपाईं बच्चालाई सुरक्षित र स्वस्थ बनाउनको लागि आफूले गर्न सक्ने सबै कुरा गर्न चाहनुहुन्छ। एकै साथ तपाई स्वस्थ रहन पनि चाहानुहुन्छ। धेरै महिलाहरु चलिरहेका स्वास्थ्य अवस्थाको उपचारको लागि गर्भावस्थामा औषधी लिन्छन्, तर कसरी थाहा पाउने यदि उनीहरु सुरक्षित छ भने?
एक राम्रो रक्त शर्करा संख्या के हो
यस अनुसार एक सीडीसी रिपोर्ट विशेष गरी महिलाहरूमा एन्टिप्रेप्रेसन्ट लिने अमेरिकी वयस्कहरूको संख्या बढ्दो छ। करीव १ 18% महिलाहरू भन्छन् कि उनीहरूले गत महिनामा anti% भन्दा बढि पुरुषहरूको तुलनामा एक एन्टिप्रेसप्रेस लिइसकेका छन्।
ईफेक्सोर (भेन्लाफैक्सिन) एक एन्टीडिप्रेससन्ट हो जुन सेरोटोनिन र नोरिपाइनफ्रिन रिउपटेक इनहिबिटरहरू (SNRIs) भनिने औषधिहरूको समूहको अंश हो। यसले मस्तिष्क रसायनलाई परिवर्तन गर्दछ जुन डिप्रेसनमा मानिसहरूलाई असंतुलित हुन सक्छ। यो सामान्यतया विस्तारित रिलिज फॉर्मूलेसनमा पनि निर्धारित गरिन्छ, एफफेक्सोर एक्सआर। डिप्रेसनको अलावा, एफेक्सोरलाई पनि उपचारको लागि लिइएको छ चिन्ता र बारम्बार आतंक आक्रमण। यदि तपाईं एफफेक्सोर लिइरहनु भएको छ र तपाईं गर्भवती हुनुहुन्छ वा गर्भवती हुनको लागि योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ भने, तपाईं गर्भवती भएको बेला एफफेक्सोर, वा एफफेक्सोर एक्सआर लिन सुरक्षित छ कि भनेर तपाईंले सोचिरहनु भएको हुन सक्छ।
के एफएक्सोर ले गर्भवती हुन र बस्न गाह्रो बनाउन सक्छ?
त्यहाँ छन् कुनै पढाई छैन हाल जाँच गर्दै कि एफेक्सोरले पुरुष वा महिलामा बांझपन पैदा गर्न सक्दछ वा गर्भवती हुनमा लाग्ने समय बढाउँदछ। प्रायः अनुसन्धान अध्ययनहरूले एफिएक्सोर र गर्भपातको उच्च सम्भावनाको बीचमा लिंक देखाउँदैन, तर एउटा अध्ययन एफेक्सोर लिने महिलाहरूले गर्भवती हुने सम्भावना बढी पाए। उपचार नगरिएको उदासीनता भएका महिलाहरुमा गर्भ तुहुने जोखिम बढेको छ।
के एफफेक्सर प्रारम्भिक गर्भावस्थामा सुरक्षित छ?
एक मनोचिकित्सकको रूपमा, म धेरै निराश र चिन्तित महिलाहरूको मूल्यांकन गर्दछु जो गर्भवती र स्तनपान गर्दैछन्,लीला मगावी, एमडी, मनोचिकित्सक र क्षेत्रीय चिकित्सा निर्देशकका भन्छिन् समुदाय मनोचिकित्सा भित्रदक्षिणी क्यालिफोर्निया।भेन्लाफैक्सिन वा एफफेक्सोर एक सुरक्षित एन्टीडिप्रेससन्ट हुन सक्छ जुन गर्भावस्थाको समयमा मुड र चिन्ताका लक्षणहरूलाई लक्षित गर्न सक्छ।
एफेक्सोरले जन्म दोष वा अन्य स्वास्थ्य समस्याहरूको सम्भावना बढाउँछन् भन्ने बारे अनुसन्धान मिश्रित छ। डा। मग्वी भन्छिन्, सामान्यतया, सबै गर्भवती महिलाहरुमा def% देखि%% जन्म दोष भएको बच्चा हुने सम्भावना हुन्छ। एफेक्सोर लिने pregnant०० भन्दा बढी महिलाहरूको अनुसन्धानले देखाए कि उनीहरूको जोखिम समान दायराको वरिपरि थियो:%% देखि%%।
केही अनुसन्धानले देखाउँदछ कि एफफेक्सोर पहिलो तिमाहीको समयमा लिन सुरक्षित छ। तर, मा प्रकाशित एक अध्ययन जामा मनोचिकित्सा लि early्कहरू एफफेक्सोर लिने सुरुमा गर्भावस्थाको समयमा अधिक जन्म दोषहरु अन्य antidepressants भन्दा, को दोष सहित:
पेटको पर्खाल (ग्यास्ट्रोसिसिस)
ओठ र मुखको छत (क्लीफ्ट ओठ र फ्याँक्ने तालु)
अध्ययनका लेखकहरू स्वीकार गर्छन् कि थप अनुसन्धान आवश्यक छ।
के एफफेक्सर ढिलो गर्भावस्थामा र स्तनपान गर्दा सुरक्षित छ?
ती महिला जसले गर्भावस्थाको अवधिभर एफफेक्सोर लिन्छन्, तेस्रो त्रैमासिक सहित, र स्तनपान गराउँदा बच्चा विषाक्त लक्षण, फिर्ती, र सेरोटोनिन सिन्ड्रोम सहितको बच्चाहरू हुन सक्छ, जस्तै:
के एक सामान्य रक्त शर्करा पढ्नु पर्छ
मांसपेशी टोन सर्तहरू (हाइप्टोनिया वा हाइपरटोनिया)
अक्सिजनको कमीले गर्दा सास फेर्न र नीलो छालामा समस्या
खाने र सुत्नमा समस्या
असामान्य निद्रा बान्की
यी लक्षणहरूलाई लामो अस्पताल, र अन्य उपायहरू जस्तै ट्यूब खुवाउने र सास फेर्न सहयोग आवश्यक पर्न सक्छ।
कुन एन्टीडिप्रेसन्ट्स सुरक्षित छ गर्भवती र नर्सि while गर्दा?
गर्भवती महिलाहरूले प्रयोग गर्न सक्दछन् अधिकांश एन्टीडिप्रेससन्टहरू गर्भावस्थामा सुरक्षित रूपमा । तर, ईफेक्सोर गर्भावस्थामा एन्टिडिडप्रेसन्ट थेरेपी शुरू गर्दा सामान्यतया पहिलो विकल्प हुँदैन।लेस्ली साउथार्ड भन्छन्, Pharm.D, को संस्थापक स्तनपान गराउने फार्मासिस्ट ।
कसरी छिटो प्राकृतिक रक्तचाप घटाउने
डा। साउतहार्ड र डा। मग्वी सहमत छन् जोलोफ्ट (sertraline) प्राथमिकता छ। यो गर्भवती महिलाहरूको लागि सुरक्षित एन्टीडिप्रेससन्टहरू मध्ये एक मानिन्छ किनकि यो 30० बर्षदेखि बजारमा छ र यसको पछाडि सबैभन्दा धेरै डाटा छ। यद्यपि, Zoloft जटिलता संग आउन सक्छ। तपाईको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग छलफल गर्न निश्चित हुनुहोस्।
सम्बन्धित: के गर्भावस्थामा Zoloft लिन सुरक्षित छ?
तपाईको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले तपाईलाई कुन चाहिने औषधि र खुराक तपाईको आवश्यकता र समग्र शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यको आधारमा उत्तम काम गर्ने निर्णय गर्न मद्दत गर्दछ।
तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग कुरा गर्नु भन्दा पहिले एन्टिडिडप्रेसन्ट सुरु वा बन्द नगर्नुहोस्। एन्टीडिप्रेससन्ट अचानक रोक्दा वास्तवमा लिनु भन्दा अधिक हानि हुन सक्छ। डा। मागवी भन्छिन्, यसले सम्भाव्य रूपमा बिग्रिएको मुड र चिन्ताका लक्षणहरू निम्त्याउन सक्छ जसले आमा र बच्चा दुबैलाई असर गर्न सक्छ।
यदि तपाईं गर्भावस्थामा एन्टीडिप्रेससन्ट लिन रोक्ने निर्णय गर्नुहुन्छ भने, तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले बिस्तारै बिस्तारै खुराक घटाउने छ। तिनिहरूले तपाइँको मानसिक स्वास्थ्य अवस्था व्यवस्थापन गर्न अन्य तरिकाहरू बारे छलफल गर्नेछन्।
महिलाहरूमा अटोम्यून डिसअर्डरहरू किन बढी सामान्य हुन्छन्?
नयाँ आहार गोली तपाइँको पेट मा एक 'गुब्बारा' मा विस्तार
50 सबैभन्दा सामान्य औषधि अस्पताल मा प्रयोग गरीन्छ
मँ कति 3mg मेलाटोनिन गोलि लिन सक्छु